असुरक्षित यौन सम्पर्कवाट हुने यी घातक रोगहरू
इंग्ल्याण्डमा सिफलिस र गोनोरियाको संक्रमण बढ्दै गएको तथ्याङले देखाएको छ । यौनजन्य रोग गोनोरिया र सिफलिसको संक्रमण गएको वर्षभन्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेको देखिएको हो । नयाँ तथ्यांक अनुसार सन् २०१७ मा त्योभन्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा गोनोरियाको संक्रमण २२ तथा सिफलिसको संक्रमण २० प्रतिशतले बढेको छ । इंग्ल्याण्डमा यौनजन्य रोगको उपचार भने प्रभावकारी नै रहेको […]
भुलेर पनि यी औषधिको सेवन नगर्नुहोस्, जसले गर्दा घट्छ तपाइको यौन चाहना
एजेन्सी, यौन चाहना नआउनुका कारण रागरसको गडबडीलाई मानिन्छ । त्यस्तै व्यक्तिले उच्च रक्तचाप, मनोद्दिपक (मानसिक रोगको) औषधि र मधुमेहको औषधिको सेवन गरेको अवस्थामा पनि उसमा सो इच्छा नआउन सक्छ । यसका साथै आफ्नो दिनचर्या निकै व्यस्त हुने गरेका व्यक्तिमा थकान र विभिन्न कुराको तनावले गर्दा मानसिक रूपमा तयार नहुनाले पनि यौन इच्छा नआउन सक्छ । […]
विश्वमा चर्चित बनेका यी १२ सेक्स काण्डहरु
मानिसहरू यौन उत्तेजनामा पुगेएको अवस्थामा होस् गुमाउने गरेको घटनाले बेलाबखमा चर्चा पाउने गरेको छ । यस्तो हुनुमा आफुलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु नै हो । कतिपय भने नयाँ रेकर्ड र प्रयोग गर्ने उद्देश्य राख्दा यस्ता घटनाको चर्चा हुने गर्छ । विश्वमा त्यस्ता सेक्स काण्डहरू छन् जुन विश्व मै चर्चा पाएका छन् । आज हामीले विश्वमा चर्चा […]
युवतीहरुले यौन सम्बन्ध अगाडि यस्ता कुराहरु ढाट्छन्
हाम्रो समाजमा पूरुषले धेरै ढाट्छन् भन्ने प्रचलन छ तर महिलाहरुले पनि कुनै समय ढाट्छन् । केहि अवस्था महिलाहरुको अनुहारले बोलिरहेको हुन्छ । यो कुरामा कति पुरुषहरु चनाखो हुन्छन् अथवा भनौँ उनीहरु अनुहारको अवस्था हेरेर महिलाको वास्तविक परिस्थितिको आकलन गर्न सक्छन् । पुरुषहरु महिलालाई विश्वास गरे गरुन् नगरे नगरुन् तर महिलाहरुले कुनै न कुनै रुपमा ढाँटिरहेका […]
युवतीको योनीको आकार ओठबाटै थाहा पाउन सकिन्छ
एजेन्सी, युवतीको योनीको आकार ओठबाटै थाहा पाउन सकिन्छ, महिलाहरुको ओठले उनीहरुको यौन प्रतिको व्यवहारलाई पनि बताउछ । स्टकल्याण्डमा गरिएको एक अनुसन्धानमा बताइए अनुसार थेप्चो ओठ हुनेभन्दा माथिल्लो ओठ बिचमा केही अग्लो र थोरै चुच्चो भएका महिला यौनसम्पर्कका बेला छिटो चरमोत्कर्षमा पुग्ने तथ्य पत्ता लागेको छ । महिलाहरुको ओठको आकार, योनी, पाठेघर र अन्य यौनांगहरुको संवेदनशीलतासँग […]
यसकारण महिनामा एकपटक यौनसम्पर्क गर्ने महिलाको चाँडै महिनावारी रोकिने
एजेन्सी, महिनामा एकपटक यौनसम्पर्क गर्ने महिलाको चाँडै महिनावारी रोकिने ! महिनावारी एक महिलामा हुने प्राकृतिक नियम नै हो यो महिलामा महिनाको अन्तिममा हुने गर्छ महिलालाई महिनावारी भइसकेको केहि दिनपछिको समयमा यौनसम्पर्क गर्यो भने गर्भवती हुन्छ यौन सम्पर्क नगर्ने महिलाहरु चाँडै महिनावारी रोकिने एक अध्ययनले पत्ता लागेको छ । अनुसन्धानकर्ताले सप्ताहमा एकपटक यौनसम्पर्क गर्नेहरु भन्दा महिनामा […]
२९ माघ, पोखरा । गर्भवती र सुत्केरी महिलाको ज्यानै जोखिममा परेको खण्डमा गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘एयर लिफ्टिङ’ गरेर सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा उपचारका लागि पु¥याउने भएको छ । प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को आज पोखरामा बसेको बैठकले सो अवस्थाका महिलालाई अस्पतालसम्म पु¥याउने खर्च सरकारले व्यहोर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार गर्भवती र […]
महिलाको योनीको रोचक तथ्यहरु
महिला गुप्तांग अर्थात् योनी निकै संवेदनशील अंग हो । सम्भोगको सन्तुष्टि देखि, गर्भाधान र सन्तान पैदा गराउने मार्गको रुपमा रहेको यो अंगका विषयमा केही अनौठा तथ्यहरु भने थाहा नहुनसक्छ । औषत आकार ३—४ इन्च हुन्छ, तर सम्भोगको चरमोत्कर्षका बेला यसको आकार २ सय प्रतिशत सम्म वृद्धि हुनसक्छ । योनीको उत्तेजक भाग अर्थात् भंगाकुरमा ८ हजार […]
एजेन्सी, महिला र पुरुषबीचको यौनसम्बन्धमा दुबैको सन्तुष्टिका लागि आदर्श समय २४ मिनेटको हुने एक अनुसन्धानले देखाएको छ । तर अनुसन्धान भन्छ– अधिकांश यौनसम्बन्धहरुमा भने यो औषतन १८ मिनेटमैं टुंगिन्छ । कतिपयमा यो भन्दा पनि कम समयमानै टुंगिने अनुसन्धानले बताएका छन् । अनुसन्धानका अनुसार, यौनसम्बन्धमा पूर्व कामक्रिडा नहुनु र पुरुषको अंग पूर्णरुपमा तयार नहुने या शीघ्र […]
गुदामैथन गर्नुका कारणहरु
गुदामैथन कुराको जवाफ प्राप्त गर्न सजिलो छैन, तर भिन्न भए पनि यो प्राकृतिक यौन अभिव्यक्ति वा व्यवहार नै हो भन्ने मान्यता छ । फ्रायडले भनेझैं मुख, यौनाङ्ग र गुदा क्षेत्र शरीरको अन्य अङ्गभन्दा बढी यौन संवेदनशील हुन्छन् । योनिको बाह्य भागजस्तै गुदद्वारमा पनि प्रशस्त स्नायु हुन्छन् । अर्को कुरा, प्रोस्टेट अर्थात् पौरुष ग्रन्थि गुदानलीको ठीक […]
छिनछिनमै पिसाब लाग्ने समस्या सामाधान गर्ने उपायहरु
पानी कम खाएमा पिसाव पोल्छ । धेरै जसो मानिस लाई पिसाव पोल्ने गर्दछ । आधा घण्टामा अथवा पन्ध्र,पन्ध्र मिनेटमा बाथरुम छिर्नै पर्ने हुन्छ । पानी बढि भएको होला भनेर कम पानी खान थाल्दा पनि पिसाबयन्त्रले पत्तो पाउँदैन । यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिने सोँचेको भन्दा धेरै जना हुन्छन् । तर किन हुन्छ यस्तोरुआजको अङ्कमा हामी तपाईहरूलाई ‘छिनछिनमै […]
मलद्वारबाट यौनक्रिडाको स्वाद लिँदा के हुन्छ ?
यौन विशेषज्ञ डा. सुमनराज पन्त धेरै जसो जोडीको एउटै जिज्ञासाले चकित छन् । यौन समस्याको समाधान लिएर आउँनेहरु नेपालीहरुसँग पनि एउटै जिज्ञासा धेरै आउँने गरेको छ । यसले नेपालीहरु पनि किन यतातर्फ लागिरहेका छन् भन्ने इङ्गित गर्दछ । अधिकांशको चासो देखिन थालेको छ की मलद्वारबाट यौनक्रिडाको स्वाद लिँदा के हुन्छ ? यसलाई उहाँले एकमुष्टमा जवाफ […]
यदि तपाई बच्चाका लागि योजना बनाइरहनुभएको छ भने तपाईले सायद बुधबारको रात गर्भ बसाउने कोसिस गर्नुपर्दथ्यो किनभने यो दिन गर्भवती हुनका लागि सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ ।यहाँसम्म कि जनवरी २ लाई ‘नेशनल बेबी मेकिङ डे’ पनि भनिन्छ किनभने युकेको आधिकारिक आँकडाका अनुसार धेरैजसो मानिसको जन्मदिन सेप्टेम्बर २६ तारिखमा पर्छ जुन ३८ हप्तापछि आउँछ । धेरैजसो गर्भ […]
दाह्री पाल्नेले चुम्बन गर्न नपाउनेदेखि बत्ती निभाउनु पर्ने सम्मको संभोगका अनौठा नियमहरु
पार्टनरबीचको सहमतिमा सम्भोग हुनु सामान्य विषय हो । सम्भोगका विषयमा समाज र देश अनुसार फरक फरक धारण रहँदै आएको छ । कुनै देशमा सम्भोगलाई सामान्य लिइन्छ भने कहि निकै कडा नियम बनेको हुन्छ । हंगेरीमा सम्भोगका लागि अनौठो कानून छ । त्यहाँ कुनैपनि जोडीले बत्ती बालेर सम्भोग गर्न पाउँदैनन् । यदि बत्ती बालेर सम्भोग गर्दै […]